Dhulfidsan (eBook) by edwin a abbott (Author)
by edwin a abbott (Author)
Farshaxankan cilmiga sayniska iyo xisaabta ayaa ah mid si cajiib ah u cajiib ah oo aad u xiisa badan oo soo jiidasho leh akhristayaasha in ka badan 100 sano.
Waxay sharraxaysaa socdaallada labajibbaarane, xisaabiye iyo deggane dhul laba geesood leh, oo dumarku, dhuuban, xariijin toosan yihiin ay yihiin qaababka ugu hooseeya, iyo meesha raggu ay yeelan karaan tiro kasta oo dhinac ah, iyada oo ku xidhan xaaladdooda bulsho.
Iyada oo loo marayo dhacdooyin yaab leh oo u keena isaga oo xidhiidh la leh qaabab joomatari badan, labajibbaaradu waxaay leeyihiin khibrad dhul ballaadhan (saddex cabbir), dhul toosan (hal cabbir) iyo dhul dhibic (aan cabbir lahayn) ugu dambayntiina waxay soo jiitaa fikradaha booqashada dhul afar ah cabbir — fikrad kacaannimo ah oo loogu soo celinayo adduun-laba geesood leh. Sheekada kaliya maahan mid xiisa leh, haddana waa horudhac heerka heerka koowaad ah oo ku saabsan fikradda mugga dhinacyo badan. "Wax barid ah, madadaalo, iyo dhiirrigelinta khayaaliga."
Dhulfidsan: Flatland, ...
Write a Review for Dhulfidsan: Flatland, Somali edition
Dhulfidsan has been added
Dhulfidsan has been added to your wish list.